Ngaba unganditshela oko kwenza i-nic backlinks ezisebenzayo zisebenza kwi-SEO?
Ngaphambi kokukubonisa ukuba yeyiphi iipropati ezenza i-niche backlink esebenza ngokusesikweni kwi-SEO (Search Engine Optimization), masiqonde ukuba zeziphi iintlobo zekhonkco ezisetyenziselwa loo njongo. Ngokuqhelekileyo, xa kuziwa kwi-SEO, sinokusebenzisa ngokufanelekileyo izi zimbini ezilandelayo ze-backlinks - nokuba yiNomboloNcedisa izixhumanisi okanye i-DoF ezilandelayo.
I-backlink nge-DoF yeempawu zemiqathango yazo enexabiso elichanekileyo nelibonakalayo kwi-SEO. Kuthetha ukuba i-DoF ilandele i-backlink inokukunika amandla kwi-metrics ehambelana ne-Metrics eyaziwayo njenge-PageRank, trust and authority authority. Kubonakala ukuba, ezo zinto zangasemva zisebenza - web design services. Ngenxa yoko banokusetyenziswa njengendlela yokuhamba kuyo yonke into-bobabini abasebenzisi abaphilayo, kunye ne-bots yokukhangela iinjongo zokuncedisa. Ngakolunye uhlangothi, ke, ezi zikhohlakeleyo zisebenza ukusabalalisa loo "jisi yolwazi" engacacileyo phakathi kwamacala amabini enxulumene nomthombo kunye nommkeli.
2. I-Backlink nge-NoFollow impawu ayifani. Nangona le mihla yangasese isebenza (ubuncinci inxalenye) njengokuba kuncedisa ukunyusa izinga lokuthunyelwa kweendlela kunye nezinga eliphuculweyo lokuguqulwa, abavunyelwe ukuhamba kwemisebenzi yokuphila - nje ngeenjongo zokukhawulela, kunye nokukhokelela kwinqanaba elithile izivuno ezintle ze-SEO ngexesha elide.
Yintoni eyenza i-niche backlinks yomgangatho ophezulu?
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, i-backlinks yekhwalithi yekhwalithi yinkcazo ihamba ngokucacileyo ezo ziqhagamshelwano ezihamba phambili (ngaphandle koko, qhagamshelanisa) indawo okanye iindwendwe zeblogi kumthombo wesithathu kunye nendlela yokusebenzisa amagama angundoqo. Kwaye kukho izinto ezininzi eziqwalaselwa ziinjinjini eziphambili (njenge-Google ngokwayo, i-Yahoo, i-Bing, njalo njalo) "ukuqonda" ukuqinisekiswa kwe-nic backlinks kunye ne-SEO. Nantsi yintoni eyenza i-backlink ephakamileyo ephezulu eyenza i-SEO yakho iinjongo ezifanelekileyo kunokwenzeka - iipatheni zokudibanisa ezisisiseko, igunya lekhonkco, kunye nokuhambelana, kunye nobudala be-domain edibeneyo.
Ngenxa yokuba ngisho noMnyama_obuchule buye buqhelekile kwaye buqwalaselwa kakuhle kwiminyaka yamuva nje, iGoogle ngoku igxininisa umgangatho wabo, kunokuba iipateni ezinomlinganiselo. Ngokucacileyo, ukuba neendawo ezincinci ezinxulumene nomgangatho ongaphantsi kokungaxhomekeke ngokupheleleyo okanye nangona nto ingabalulekanga nantoni na i-SEO. Ukongezelela, ngaphandle kokuhlawula ingqwalaselo echanekileyo kwiipatheni zokwakha izityalo ezisemgangathweni azikho nje ukukwazi ukubonelela naluphi na ukuphakanyiswa okulinganayo kwi-SEO kodwa unokufumana iwebhusayithi yakho okanye iblogi isilathiso esibi kakhulu, esinokukudonsa phantsi uluhlu lwe-SERPs .
Isixhumanisi seGunya - uthetha yonke into efunyenweyo kwiprofayili yakho yekhonkco kufuneka ibe nefanelekileyo kwaye ihlaziywe ngokusemandleni. Ngaloo ndlela kuphela unokuqinisekisa ukuba i-backlinks enjalo isebenza kahle, ngokukodwa ngokubhekiselele kwisakhiwo esomeleleyo sokuthembela nokuthembeka kwiphepha lakho lephepha. Ngaloo ndlela, iziphathamandla zamanqanaba omgangatho ophakamileyo zinokukuqinisekisa inkqubela phambili eninzi kwamehlo abaphandi abaphilileyo, kunye neGoogle kunye. Ubudala beDeski (i-25) yobudala beDesi - nangona le propati ihlala ihlulwe ngaphakathi kwinqanaba lolawulo kunye nokuxhomekeka, ubudala be-domain edibeneyo ngokuchanekileyo yintoni echaza i-backlinks ye-niche ephakathi kweyona mgangatho ophezulu kunye namandla kwi-SEO. Nangona iibhanki ezivela kwimimandla embalwa-ubudala zikwazi ukwenza kakuhle, ezivela kwimimandla engaphezulu yeminyaka zihlala zigcinwa yiGoogle njengabo banikela ngokubaluleka kokubaluleka kunye nokusetyenziswa okufunekayo kuboniswe kubaphulaphuli abanzi, oko kushukumisa iwebhusayithi yakho okanye iblogi kufuphi naphezulu kwoluhlu lwe-SERPs.